Fanomezana fitsangatsanganana IWCA - Fikambanan'ny Ivotoerana manoratra iraisam-pirenena
IWCA dia faly manolotra vola fanampiana fitsangatsanganana hanampiana ireo mpikambana IWCA hanatrika ny fihaonambe fanao isan-taona.
Raha te hampihatra dia tsy maintsy mpikambana IWCA manana toerana tsara ianao ary tsy maintsy mandefa ireto fampahalalana manaraka ireto amin'ny Vavahady fidirana ho mpikambana IWCA:
Fanambarana voasoratra misy teny 250 milaza izay mety hahasoa anao, ny foibem-panoratanao, ny faritra misy anao ary / na ny saha ny fahazoana ny vatsim-pianarana. Raha efa nahazo soso-kevitra ianao dia aza hadino ny milaza izany.
Ny fandaniana amin'ny teti-bolanao: fisoratana anarana, trano fandraisam-bahiny, fitsangatsanganana (raha mitondra fiara, $ .54 isaky ny iray kilaometatra), isaky ny totaliny, fitaovana (afisy, taratasy zaraina, sns.).
Izay famatsiam-bola ankehitriny mety anananao avy amin'ny fanampiana, andrim-panjakana na loharano hafa. Aza asiana vola manokana.
Ny filan'ny teti-bola sisa tavela, aorian'ny loharanom-bola hafa.
Ireo fangatahana fizahan-tany momba ny fizahantany dia hotsaraina araka ireto mason-tsivana manaraka ireto:
Ny fanambarana an-tsoratra dia manome antony mazava sy amin'ny an-tsipiriany momba ny tombontsoan'ny olona.
Mazava ny tetibola ary mampiseho filàna lehibe.
Ireto misy manaraka:
Ny mpangataka dia avy amin'ny vondrona tsy misy solontena, ary / na
Ny mpangataka dia vaovao amin'ny sehatra na mpanatrika voalohany